Iimpuku Amabali malunga nabo ukubhiyozela uNyaka oMtsha waseTshayina | Uncwadi lwangoku
Iimpuku. Zimbalwa izilwanyana ezine igama elibi njengabo. Ngaphandle kwezinye Rataouille Amaxesha ngamaxesha, abanye abathandwa okanye abanomdla kuyo nantoni na engeyiyo amalinge enzululwazi. Kodwa kuncwadi abalunikayo kumabali amaninzi, ngakumbi uloyiko. Kwakhona, unyaka omtsha wamatshayina uqale izolo Impuku yentsimbi. Ke kukho ezi zihloko apho iigundane ziphambili khona.
1 Iigundane-Miguel Delibes
2 Ibali elimangalisayo le-Rat Snacks-David Walliams
3 Masingenwe ziimpuku! -Begoña Oro
4 I-Rat King-uJames Clavell
5 Rat Rat-URichard Corben
6 Amabuba Amangcwaba - uHenry Kuttner
7 Ukungcwatywa kweeRats - iBram Stoker
Iimpuku -UMiguel Delibes
Uncwadi lwakudala lweSpanish. Ibali le INini kunye nePokhethi, abahlala emqolombeni kwaye basinde ukuzingela iimpuku emlanjeni wedolophu, isebenza njengombono ombi kwaye kunzima kakhulu kwi idrama nosizi, kodwa nobukhulu nobuhle beNkosi Indawo yasemaphandleni yexesha.
Ibali elimangalisayo le ... -UDavid Walliams
Siya ku uncwadi lwabantwana, Apho zivela kwiintsomi zamandulo ezinje Impuku encinci (ukusuka kwi-Perrault) okanye Ikamva likaHamelin (ukusuka kwiGrimms), siqhubela phambili kwi Eyona nto ithengiswayo NjengoWalliams. Eli libali lika Zoe, intombazana ethanda mascot ku ireyiti kwaye kufuneka ndiyikhusele kwi- Umthengisi wehamburger embi Ukuhambahamba, kukhenketho olunoburharha obuninzi. Ukususela kwiminyaka eli-9.
Masingenwe ziimpuku! -Begoña Oro
U-Begoña Oro Pradera uvela Zaragoza kwaye ukongeza kwi umguquleli nomcebisi umpapashi, ikwangumbhali woncwadi lwabantwana nolutsha kunye neencwadi zesikhokelo. Uphumelele Ibhaso leGrand Angle ngo-2011 kwaye ungapapashi njani kunye netywina lesalathiso njengoko linjalo I-Steamboat.
Kule ncwadi sihlangana abafundi besikolo owayephupha ngokufundisa kwi Inqaba enchanted, kude kube lusuku olunye utitshala wabo ebhengeza utyelelo lwe Inkonzo yokuchithwa. Kodwa i Abatshabalalisi yenkampani eye yaziswa Umlingo kwaye wajika abafundi baba ziimpuku ebangela indyikitya yokufa esikolweni. Kananjalo abo bantwana baya kuphumelela fumana isisombululo ukuze zingatshabalali kwaye ziphinde zibe ngabantu?
Kumkani weempuku -UJames Clavell
Ngaba ifayile ye- inoveli yokuqala ngumbhali wase-Australia (isiNgesi esenzela eminye imithombo), kamva esaziwa ngezihloko ezinje Shogun okanye njengoko umbhali wesikrini (Ukusinda okukhulu) kunye Mlawuli Iimuvi (Imvukelo eklasini). UClavell walwa kwi IMfazwe Yehlabathi yesiBini kwaye kwenziwa kuphela iminyaka eyi-18 ibanjwa ngamaJapan kwaye athunyelwa ku ijele ovela eSingapore. Amava amnceda ukuba abhale eli bali elalikwinkampu yoxinaniso eSingapore.
Bahlala kunye apho Amagosa aseBritane, eAustralia, eNew Zealand, eMelika naseCanada, kwaye eyona ngxaki yabo inkulu kukuswela ukutya namayeza. Kuphela eyona inamandla iyasinda kwaye phakathi kwabo kukho reyInkampani yaseMelika, enobuchule kuzo zonke iintlobo zeshishini ezinje, umzekelo, iintsana.
Uthixo wempuku -URichard Corben
Kwaye safika loyiko, kuqala ngohlobo lwe udidi, kunye noCorben, othi kweli bali asixelele izinto ezoyikekayo Ezifihliweyo kwi amahlathi kufuphi Arkham. Kubo kuza kukhukhumala dolophu oqalisa imfuno eya kumkhokelela ekudibaneni eyoyikisayo ukuba baxube Utshintsho lwe-lovecraftian nge amabali amaIndiya.
Amangcwaba engcwaba -UHenry Kuttner
UHenry Kuttner wayeyinxalenye ye isangqa fan fan obhalelana naye. Umbhali wenoveli waseLos Angeles kunye nembali eyoyikisayo kunye nesayensi epapashe yakhe Ibali lokuqala ngo-1936. Yile nto ke le ibali eyoyikisayo kwi silwe engapheliyo ye UMasson, umgcini omdala welinye lamangcwaba amadala ase Salem, kunye neempuku.
Ukungcwatywa kweempuku - IBram Stoker
Okokugqibela, elinye lamabali ayoyikisayo enkosi yase-Ireland yenkulungwane ye-XNUMX eyabhalayo ngaphambili Dracula. Cwangcisa ifayile ye EParis ephantsi komhlaba, ubale i isenzo sodelo-ngozi ethi ibe ngu uleqe amaphupha amabi a selula IsiNgesi esingena nzulu kubo kwaye sidibana naso amanani esiporho kuye usizi lusule ubuntu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » Iimpuku Amabali malunga nabo ukubhiyozela uNyaka oMtsha waseTshayina